Kaningi kunezimo lapho Windows XP kuyinto sebekubeke enqaba ukuba ivuleke. Imbangela yalesi simo kungaba ukwehluleka letindzala yamandla iconsi, ngenxa amagciwane noma nezinye izinto ezihlukahlukene. Ingozi le nkinga kwandisa ngokulingana ngqo inkathi yokusetshenziswa kohlelo, okwenza isikhathi eside wokusebenza ngaphandle kokuthi faka ngempela okuyingozi.
Ezimweni ezinjalo, ngokuvamile, ukulondoloza ulwazi kusuka kudiski yendawo "C" futhi aqhubeke nokuqhuba uhlelo, izindlela ezifana:
- ukubuya okuseshwa zokugcina ugcine;
- kulayishwa lokugcina ukucushwa ezinhle;
- entry kumodi ephephile.
Nokho, ngokuvamile abantu yalezi zindlela ayisakwazi ukusiza. Ngesikhathi esifanayo, bambalwa abantu bazi mayelana indlela enjalo ezilula kodwa eziphumelelayo - Windows XP yokutakula kusukela yokutakula Console. Inqubo ngempela silula, ukuze Windows yokutakula console ngeke zibangele noma iyiphi nobunzima ngisho saqala. Nokho, lokhu kudinga disk nge Windows XP.
Ukuze uqale ekubuyiseleni Windows XP ngokusebenzisa le yokutakula Console, udinga ukufaka disc zibe computer yakho futhi iqalise ke. Ekuqaleni ebhuthini, cindezela inkinobho «susa», okuzokwenza iya kuzilungiselelo «bios». Kukhona igunya akudingeki ukulanda ukufaka ukukhetha yokuqala «CD-Rom» bese uchofoza «F10», bese uqinisekisa izinguquko ngokucindezela «Y» (okusho «Yebo»). Ikhompyutha izoqalisa phansi ngesikhathi ukuqalisa amasheke disc e idrayivu, ucelwa ukuba uqinisekise ngokucindezela noma iyiphi inkinobho on the ikhibhodi ukuthi kudingeka ngempela ukuba ivuleke kusukela disc idrayivu.
Ngaphezu kwalokho, ukusakazwa Windows XP uzolayishwa ku inkumbulo, futhi isikrini blue livela, okuyinto siyonikwa ukufaka noma ukuze siphinde sithole i-Windows. Buyisela i-Windows XP usebenzisa yokutakula Console siyophumelela uma umsebenzisi ngazo ukhiye «R», okusho khetha "Buyisela" okukhethwa kukho.
Ngemva kokuqinisekisa Ukukhetha livela, sicela "kulokho uhlelo udinga ukungena ngemvume." Njengomthetho, umsebenzisi eyodwa kuphela yesistimu yokusebenza kwi PC, ngakho-ke bese ukhetha. Khona-ke, faka iphasiwedi nomqondisi (uma kunesidingo) bese uchofoza «Faka» inkinobho.
Isinyathelo esilandelayo kuyoba ukubonakala okucashunwe «C: \_ amafasitela>», lapho udinga ukufaka: «fixboot» ke udinga uchofoze «Y» ukuqinisekisa ukufakwa emkhakheni "C". Khona-ke ngeke ukulayisha emkhakheni, bese futhi kukhona: «C: \_ amafasitela>», okuyinto ukwethula «fixmbr». uzobona isigijimi sesixwayiso esikrinini, ukubonakala lapho kudingeka uchofoze «Y».
Ngemva kwalokho, ukuqoshwa uzoqala ukulanda main ukuba hard drive yakho, ekupheleni okuyinto uzokwaziswa mayelana iqedwa yimpumelelo. Ngesikhathi isimemo «C: \_ amafasitela>», «Phuma» iphendulwe. Liyaqalisa computer, futhi ungakwazi futhi usebenzise lonke ulwazi azibambile therein.
Kumele kukhunjulwe ukuthi Windows XP yokutakula kusukela yokutakula Console kungenzeka uma kuba uhlelo main, futhi kuhambisana efakwe kusistimu yokusebenza etholakalayo.
Umsebenzisi owazi indlela Windows XP yokutakula kusukela yokutakula Console, ukwazi ukufinyelela ulwazi olubalulekile njalo.
Indlela elula ekhiphela up imisipha pectoral ekhaya?